PSA: Nleta ahụike ụmụ nwanyị na ọgwụ mgbochi J&J - Covid-19 2022
PSA: Nleta ahụike ụmụ nwanyị na ọgwụ mgbochi J&J
Nkwupụta nkwonkwo CDC na FDA na ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson COVID-19
N'ịgbaso ikpe 6 nke mkpirisi ọbara dị ize ndụ na ụmụ nwanyị ndị natara ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson Covid-19, FDA akpọọla oku ka a kwụsị nwa oge na CDC na-akpọkọta Kọmitii Ndụmọdụ na Omume Mgbochi Mgbochi (ACIP) iji nyochaa. FDA enyela ụmụ nwanyị ịdọ aka ná ntị ahụike gbasara ọgwụ mgbochi ahụ, na-ekwu maka nkwupụta nkwonkwo CDC/FDA nke anyị tinyere n'uju n'okpuru:
Okwu na-esonụ bụ nke a na-akpọ Dr. Peter Marks, onye nduzi nke FDA's Center for Biologics Evaluation and Research na Dr. Anne Schuchat, Onye isi osote onye isi nke CDC
Dị ka Eprel 12, ihe karịrị nde 6.8 nke ọgwụ mgbochi Johnson & Johnson (Janssen) ka enyerela na US CDC na FDA na-enyocha data metụtara ikpe isii US akọpụtara nke ụdị mkpịsị ọbara na-adịghị ahụkebe na nke siri ike n'ime mmadụ mgbe ha nwetasịrị ọgwụ ahụ. Ọgwụ mgbochi J&J. N'ọnọdụ ndị a, a na-ahụ ụdị mkpụkọ ọbara nke a na-akpọ cerebral venous sinus thrombosis (CVST) na mkpokọta platelet ọbara dị ala (thrombocytopenia). Okwu isii niile mere n'etiti ụmụ nwanyị nọ n'agbata afọ 18 na 48, na akara ngosi mere ụbọchị 6 ruo 13 ka ịgba ọgwụ mgbochi ahụ gasịrị. Ọgwụgwọ nke ụdị mkpụkọ ọbara a dị iche na ọgwụgwọ a na-enyekarị. Ọtụtụ mgbe, a na-eji ọgwụ anticoagulant a na-akpọ heparin na-agwọ mkpụkọ ọbara. N'ọnọdụ a, nchịkwa heparin nwere ike ịdị ize ndụ, yana ọ dị mkpa ka enye ọgwụgwọ ọzọ.
CDC ga-akpọkọta Kọmitii Ndụmọdụ maka Omume Mgbochi Mgbochi (ACIP) na Wednesde ka ha lebakwuo anya n'okwu ndị a ma chọpụta mkpa ha nwere. FDA ga-enyocha nyocha ahụ ka ọ na-enyochakwa ikpe ndị a. Ruo mgbe usoro ahụ ga-agwụ, anyị na-atụ aro ka a kwụsịtụ iji ọgwụ mgbochi a n'ihi oke ịkpachara anya. Nke a dị mkpa, n'otu akụkụ, iji hụ na obodo ndị na-ahụ maka ahụike maara ihe nwere ike ime ihe ọjọọ ndị a ma nwee ike ịhazi maka njirimara na njikwa kwesịrị ekwesị n'ihi ọgwụgwọ pụrụ iche achọrọ na ụdị ọbara ọgbụgba a.
Ka ọ dị ugbu a, ihe ọjọọ ndị a yiri ka ọ dị ụkọ. Nchekwa ọgwụ mgbochi COVID-19 bụ ihe kacha mkpa maka gọọmentị etiti, anyị na-ewere akụkọ niile gbasara nsogbu ahụike na-esochi ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 nke ukwuu. Ndị mmadụ natara ọgwụ mgbochi J&J bụ ndị na-ebute isi ọwụwa, mgbu afọ, mgbu ụkwụ, ma ọ bụ mkpụmkpụ ume n'ime izu atọ ka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa kwesịrị ịkpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike ha. A na-agwa ndị na-ahụ maka ahụike ka ha kọọ akụkọ ọjọọ na Sistemụ mkpesa ihe omume Vaccine Adverse Event na
CDC na FDA ga-enyekwu ozi ma zaa ajụjụ ma emechaa taa na mkparịta ụka mgbasa ozi. Nkwekọrịta Njikọ Mpụga ndekọ ndekọ nke oku mgbasa ozi dị na ọwa YouTube nke FDA.
FDA, ụlọ ọrụ dị n'ime Ngalaba Ahụike na Ọrụ Ndị Ọrụ na United States, na-echebe ahụike ọha na eze site n'ịkwado nchekwa, ịdị irè na nchekwa nke ọgwụ mmadụ na ọgwụgwọ anụmanụ, ọgwụ mgbochi na ngwaahịa ndị ọzọ dị ndụ maka ojiji mmadụ, na ngwaọrụ ahụike. Ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka nchekwa na nchekwa nke mba anyị nri, ihe ịchọ mma, ihe mgbakwunye nri, ngwaahịa ndị na-enye ọkụ eletrik, na maka ịhazi ngwaahịa ụtaba.